Iindaba -Uwenza njani umtya kumatshini kwiziko lokuchwetheza?
Umatshini womatshini njani kwiziko lokuchwetheza?
Umatshini umsonto kwiziko lokuchwetheza yenye yezona zicelo zibalulekileyo. Kwinkqubo yokulungiswa kwemisonto, umgangatho kunye nokusebenza kakuhle koomatshini kuchaphazela ngokuthe ngqo umgangatho kunye nokusebenza kwesahlulo. Apha ngezantsi siza kwazisa ngeendlela zokwenza imisonto ezisetyenziswa rhoqo kwimishini yokwenziwa, kunye nokukhethwa kwezixhobo zokwenza imisonto, inkqubo ye-NC kunye nohlalutyo kunye nenkcazo yezilumkiso. Ukuze umqhubi akwazi ukukhetha indlela efanelekileyo yokulungisa ukuphucula ukusebenza kweziko lokuchwetheza.
A. Ukuthinta ngokuguqukayo kunye nokuthelekisa okungqongqo
Kwiziko machining, evunyelwe umngxuma impompo yindlela yokwenza eqhelekileyo, kwaye kufanelekile imingxuma zomsonto kunye ubukhulu ezincinane umngxuma ephantsi indawo ukuchaneka. Inokuthinta ubhetyebhetye kunye nokungqongqo ngokuthepha iindlela ezimbini.
Ngokucofa Flexible, impompo zixinaniswe yi chuck bhetyebhetye, kwaye chuck ngokucofa kungenziwa axially ukubuyekeza imposiso feed okubangelwa feed yezihlunu yezixhobo kumatshini kunye isantya yokujikeleza yokuluka, kwaye uqinisekise inowuthi echanekileyo. Ukucofa okuguqukayo kuneempawu zesakhiwo esimbaxa, iindleko eziphezulu kunye nomonakalo olula. Ukuthinta ngokuqinileyo, ikakhulu usebenzisa intloko entwasahlobo yokubamba impompo, ukutya okulukuhla kunye nesantya sokuluka ziyahambelana nesixhobo somatshini, ulwakhiwo lulula, ixabiso lincinci, kwaye isicelo sibanzi, esinokunciphisa ngempumelelo indleko yesixhobo.
Kwiminyaka yakutshanje, ukusebenza kweziko machining uye waphucula ngokuthe ngcembe, kwaye umsebenzi engqongqo ngokucofa sele uqwalaselo esisiseko iziko machining, leyo yeyona ndlela iphambili processing intambo.
B. Ukukhethwa kweempompo kunye nokulungiswa kwemingxunya engezantsi enomsonto
Iimpompo kufuneka zikhethwe ngokuhambelana nezinto zokwenza izinto. Ngokwezixhobo ezahlukeneyo ezenziwa yinkampani yezixhobo, kuya kubakho iimodeli zeetephu ezihambelanayo. Okwesibini, nikela ingqalelo kumahluko phakathi kwempompo yomngxuma onompompo kunye nompompo wemingxunya engaboniyo, kwaye isiphelo esikhokelayo kwimpompo yokungena emngxunyeni mde. Kwaye ubunzulu bokulungiswa kwemisonto abunakuqinisekiswa, ukuba umngxunya ongaboniyo uhanjiswe ngombhobho wokungena.
A. Thread iimpawu wokugaya
Umsonto wokugaya uthetha ukusetyenziswa kwentambo wokugaya abasiki bokusila umsonto. Uncedo lokugaya imisonto enxulumene neetephu kukuba banokufezekisa ukukhutshwa kwe-chip kunye nokupholisa, ukuthintela ngokufanelekileyo iingxaki zomgangatho njengokulahleka kwamazinyo kunye nesiphithiphithi kwinkqubo yokucofa. Kwangelo xesha, xa ubukhulu bomsonto bukhulu, impompo isetyenziselwa ukwenza umatshini, kwaye amandla okuluka isixhobo somatshini awunakho ukuhlangabezana neemfuno zokwenza. Ngomatshini wokugrumba uthinte, ukusebenza ngokukuko komsonto kusezantsi, kwaye amandla omsebenzi makhulu. Inkqubo yokugaya umsonto inokuziqonda iimpawu zamandla amancinci kunye nokususwa okuhle kwe-chip, kwaye inezibonelelo zokulungiswa kwemisonto ephezulu kunye nexabiso elincinci lendawo.
B. Umgaqo wokugaya umsonto
a. Umsonto wokugaya ukwenziwa kwemacro
Ngexesha lokulungiswa kwentloko yesilinda, kukho uninzi lwemingxunya ekruqulayo ecaleni. Ngaphambili, ukucofa kwitephu yokugrumba kwakusetyenziswa, kukhokelela kubunzulu obuphezulu babasebenzi, ukusebenza ngokusezantsi, iingxaki zomgangatho njengokulahleka kwamazinyo, kunye nokunxiba ngokukhawuleza. Ukuze kuphuculwe umgangatho wokuqhubekeka komsonto, isixhobo esitsha esisebenza ngamazinyo amaninzi sokugaya umsonto sisetyenziswa kwimishini, kwaye iziko lokuchwetheza elithe tye lisetyenziselwa ukuqhubekeka.
b. Umsonto wokugaya inkqubo yamazinyo amaninzi
Ngokutsho umlinganiselo eyiyo, ubude olusebenzayo multi-izinyo umsonto wokugaya umsonto mkhulu kunokuba ubude umsonto imingxunya machining machining, kunye umkhondo ukubaleka isixhobo icwangcisiwe. Le ndlela iqinisekisa ukuba izinyo ngalinye olusebenzayo kwimisonto emininzi yokusika intambo ithatha inxaxheba ekusikeni ngaxeshanye, ngaloo ndlela kugqitywa yonke inkqubo yokufaka msonto ngokukhawuleza.